हैदरावाद विरुद्ध दिल्ली खेलमा सन्दिप टिम ११ मा छन् कि छैनन् ? «
हैदरावाद विरुद्ध दिल्ली खेलमा सन्दिप टिम ११ मा छन् कि छैनन् ?
प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०७६, सोमबार १५:५८
एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को ४० औं खेलमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र राजस्थान रोयल्सबीच प्रतिस्प्रर्धा हुँदैछ । खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका ८ : १५ देखी राजस्थानको घरेलु मैदान जयपुरमा सुरु हुनेछ ।
प्लेअफको संभावना कायमै राख्न राजस्थानले आजको खेल जित्नै पर्ने हुन्छ । दिल्ली आजको खेलमा विजयी भए प्ले अफ नजिक पुग्ने छ । राजिस्थान रोयलल्सका कप्तान स्टिभ स्मिथ,जस बटलर,जोफ्रा आर्चर,श्रेयस गोपालले उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । दिल्लीका कागिसो रबाडा, सन्दीप लामिछाने, शिखर धवन, श्रेयस ऐर, ऋषभ पन्त मुख्य खेलाडी हुन् ।
जारी आईपीएलमा दिल्ली क्यापिटल्स १० खेलमा ६ मा जित र ४ मा हारका साथ अंक तालिकामा तेस्रो स्थानमा छ । आजको खेलमा दिल्ली विजयी भए शीर्ष स्थान उक्लिने संभावना रहन्छ । त्यस्तै राजस्थान रोयल्सले ९ खेलमा ३ मा जित र ६ मा हारका सातौ स्थानमा छ ।
सन्दीपलाई एकरुपता प्रर्दशनको चुनौती
शनिवार किंग्स इलाभेन पन्जावविरुद्ध ४ ओभरमा ४० रन खर्चेर ३ विकेट लिएका सन्दीपलाई आजको खेलमा दिल्लीले पहिलो रोजाईमा मैदान उतार्ने निश्चित जस्तै छ । सन्दीपले पन्जावका विश्फोटक ब्याट्सम्यान क्रिस गेल, केएल राहुल र इंग्ल्यान्डका युवा अलराउण्डर साम करनलाई आउट गरेका थिए । पन्जावसँगको खेलको प्रर्दशन राजस्थानसँगको खेलमा पनि दोहोर्याउन सन्दीपलाई त्यतिनै चुनौती हुने छ ।
सन्दीपले दिल्लीबाट यस सिजनमा ५ खेलमा ८ विकेट लिएका छन् । सुरुवाती दुई खेलमा बेन्चमा बसेका सन्दीपले कोलकताविरुद्ध १, पन्जावविरुद्ध २, हैदरावाद र बेंगलोरविरुद्ध समान १ विकेट हात पारे । बेंगलोरको खेलपछि लगातार तीन खेलमा बेन्चमा बसेका सन्दीपले पन्जावसँगको खेलमा ३ विकेट लिँदै सनसनी मच्चाएका थिए । नेपाली दर्शकहरुको चासोको बिषय रहेको कुरा आजको खेलमा पनि सन्दिप लामिछान खेल्ने छैनन् । खेलमा पहिले टस जितेर हैदरावादले फिल्डीङ गर्दैछ भने दिल्लीले पहिले ब्याटिङ गर्नेछ ।
दिल्लीको टिममा आज को को छन् टिम ११ मा ?
हैदरावादको टिममा आज को-को छन् टिम ११ मा ?
1. Kane Williamson (W)
3. Jonny Bairstow (C)
5. Ricky Bhui
ओलम्पिकमा कल्पना परियारको राष्ट्रिय कीर्तिमान
जापानको राजधानी टोकियोमा भइरहेको ३२औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकूदमा नेपाली सुटिङ खेलाडी कल्पना परियारले राष्ट्रिय कीर्तिमान
३२ औं गृष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद आज (शुक्रबार)बाट जापानमा सुरु हुँदैछ । विश्व खेलकुदको कुम्भमेलाको रुपमा